शिल्पा कर्ण - कान्तिपुर समाचार
कीर्तिपुरको जनसेवा माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले नेपाल भाषा पढाउने शिक्षिकाको नाम ज्वजलपा राखिदिएका छन् । ज्वजलपा मिस । प्रधानाध्यापक नन्दकुमारी महर्जन भन्छिन्, ‘हामीले बोल्न नसक्ने कुरा पनि ससाना विद्यार्थी बोलिरहेका हुन्छन् ।’
महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरमा सीसीटीभी मोनिटरिङ कक्ष छ । एउटै स्क्रिनमा नगरभित्रका १० वटै क्यामेराबाट भइरहेका गतिविधि हेर्न सकिन्छ । तर त्यसमा अहिले दुईवटा मात्र चलिरहेका छन् । वृत्तमा कार्यरत एक प्रहरीका अनुसार सीसीटीभीको गुणस्तर राम्रो छैन ।
गत वर्ष काठमाडौ महानगरले सडक बत्ती कार्यक्रमका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्यायो । ‘झिलिमिली काठमाडौं कार्यक्रम’ नाम दिइएको उक्त योजनाले काठमाडौं झिलिमिली हुन सकेन । दोब्बरभन्दा बढी माग र लागत लाग्ने भएपछि उक्त योजना अपूरै भयो ।
दक्षिणकाली–१ चाल्नाखेल दक्षिणकाली जाने सडक छेउमै छ ध्रुव तामाङको घर । उनको बारी मुख्य सडकबाट झन्डै ५ सय मिटर पर छ । त्यहीँ बारीमुनि नगरपालिकाले फोहोर संकलन गरेर फाल्न थालेको छ । उनीहरूलाई बस्ती र बारी नजिकै फोहोर फाल्दा रोग फैलिने त्रास बढेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले आउँदो वर्षलाई सम्पदा संरक्षण वर्ष घोषणा गर्दै महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ ।महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले नीति तथा कार्यक्रममार्फत काठमाडौंका ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक भवनलाई नगर कला संग्रहालयमा रूपान्तरण गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल बनाउनेलगायत कार्यक्रम ल्याएका हुन् ।
शिल्पा कर्णका लेखहरु :
काठमाडौं महानगरपालिकाले अव्यवस्थित पार्किङको समस्या समाधानका लागि आइतबारदेखि स्मार्ट पार्किङ सुरु गरेको छ । बढी अव्यवस्थित पार्किङ हुने तथा कारबाहीमा पर्ने स्थान वीर अस्पताल र न्युरोड क्षेत्रमा एपबाटै बुकिङसमेत गर्न सक्नेगरी निश्चित संख्यामा पार्किङको व्यवस्था गरिएको महानगरले जनाएको छ । हील्स ट्रली योर्स नामक संस्थासँगको सहकार्यमा स्मार्ट पार्किङ सुरु गरिएको हो ।
बल्खुस्थित वाग्मती नदीको दुवै किनारामध्ये ललितपुरतर्फ मात्र बनेको छ करिडोर । काठमाडौंतर्फ भने झन्डै ५ सय मिटर हिलाम्मे बाटो छ । वर्षामा त झन् हिँड्न मुस्किल । बीचमा पानी जमेको छ । साना गाडीले त्यो बाटो प्रयोग गर्नै सक्दैनन् ।
बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका लागि नक्सांकन गरिएको जग्गामा हाउजिङ बनिसकेको छ । कीर्तिपुर नगरपालिकाको वडा नं. ६ मा पर्ने उक्त आयोजनाको केही भागमा घर बनिसकेका छन् भने केहीमा बन्दै छन् ।
चावहिलबाट बसुन्धरा जाँदा बीचमा बसुन्धरा पुल छ । जसले टोखा नगरपालिका वडा नं. ५ र काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३ लाई छुट्याउँछ । टोखातर्फ हेर्दा सडक छन्, तर महानगरपालिकातर्फ हेर्दा अलिक फराकिलो ढलझैं संरचना देखिन्छ । त्यही हो सामाखुसी खोला ।